ဒေါသခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ဒေါသခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ….
Posted by who who on Aug 9, 2013 in Buddhism, Creative Writing | 1 comment
ကျနော်နဲ့ ရေစက်လို့ ပြောရမလားပါပဲ။
ဒီလို မြင်ကွင်းတွေက ရှေ့မှာ အမြဲရောက်ရောက်လာတတ်တာလေ။
ငယ်ကတည်းက ခုထိပါပဲ။ ကျနော့စာကြည့်စားပွဲလေး က ပြူတင်းပေါက်နဲ့ တည့်တည့်လေ။ အိမ်ပေါ်ထပ်မှာလည်း ဖြစ်ပြန်။ ပြူတင်းပေါက်နဲ့ကလည်း တည့် နေလေတော့ မမြင်ချင်မှ အဆုံးပါပဲ။ ဘာဓါတ်လဲတော့မသိပါဗျာ။ လမ်းသွားတွေထဲကလည်း သွားရင်း လာရင်းက ထသတ်ကြရင် ကျနော့မြင်ကွင်းရှေ့ရောက်မှချည်းပါပဲ။ ဒါမျိုးက ဘာလို့များ တိုက်ဆိုင် သလဲမပြောတတ်တော့ပါဘူး။ တခြားနေရာမှာ ပေါက်ကွဲရင် ရရဲ့သားနဲ့။ ကျနော်အေးအေးဆေးဆေး စာကြည့်နေချိန်မျိုးမှ စာရေးနေချိန်မျိုးကျမှ ရှေ့တည့်တည့်ကနေ ဖြစ်လိုက်ကြတဲ့ ရန်ပွဲတွေလေ။
ဒါနဲ့ အသံလာရာသို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ လမ်းဒေါင့် တစ်နေရာမှာ ဒေါသကြီးစွာနဲ့ ရန်တွေထောင်နေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။
အော်.. ဘာတွေကြောင့်များ အဲလောက်ထိ ဒေါသတွေ ကြီးနေတာပါလိမ့်နော်လို့သာ တွေးမိပါတယ်။
မကြာပါဘူး။ သူမ အော်ဟစ်တာကို အစပိုင်းမှာ ငြိမ်ခံနေတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူက ထလို့ ကန်ထည့်လိုက်တဲ့ မြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရပြန်ပါတယ်။
အော်…ဒုက္ခ…ဒုက္ခ လို့သာ တွေးရင်း ဒီမြင်ကွင်းကို ကြည့်လို့ သံဝေဂတရားတွေ တိုးပွားလာရပါတယ်။
အဲလို ငှက်ပျောသီးလည်း ပေးလိုက်ရောကလေးမနှစ်ယောက်လည်း ဟိုကြည့် သည်ကြည့်နှင့် ဘာမျှမပြောတော့ဘဲ ငှက်ပျောသီးကိုင်ပြီး အကြောင်သား ငြိမ်နေကြတယ်တဲ့လေ။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီတစ်ပတ် ဓမ္မ၀ီရဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဆောင်းပါးအား ပြန်လည်ဝေမျှပါသည်။
ဖတ်စရာ ရတော့..တွေးစရာ ရ…
တွေးစရာ ရတော့…ရေးစရာ..ရ
ရေးစရာ..ရတော့.. တင်ပြစရာ ရ
တင်ပြစရာ..ရတော့.. ကွန်မန့်တွေ ရ….